लकडाउनमा लुकेर पो’र्न हेर्नुहुन्छ ? होसियार, यस्तो असर पर्ला ! – " सुलभ खबर "
यदि स्मार्ट फोनमा डाटा सस्तो हुने हो भने सबैभन्दा बढी डाटा मानिसहरुले पो-र्न हेरेर सक्ने एक अनुसन्धानले देखाइसकेको छ ।स्मार्ट फोनमा पो-र्न हेर्दा मनोरञ्जन त अवश्य मिल्ला तर यसले मनोरञ्जका साथै धेरै हा-नी समेत पुर्‍याउँछ । मोबाइलमा पो-र्न हेर्न सजिलो छ । तर, वर्तमान अवस्थामा मोबाइलमा पो-र्न हेर्नु महंगो समेत छ ।
पो-र्न हेर्नेहरुलाई डि-प्रेशनले सताउने गरेको अनुसन्धानले समेत देखाइसकेको छ । उनीहरुले एक्लोपनलाई साथी बनाउने हुँदा डि-प्रेशनको सि-कार हुने गरेको बताइएको छ ।यौ-न व्यक्तिगत विषय भएपनि यसले पारिवारिक क-लह निम्त्याउन सक्छ । पो-र्न हेर्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्यले देख्ने हुँदा यसले स’मस्या बनाउन सक्छ ।
अत्याधिक पो-र्न हेर्नेहरुको ध्यान ह-स्तमैथु-नमा जाने शोधले समेत देखाइसकेको छ । उनीहरुमा ह-स्तमै-थुन गर्ने बानीको विकास हुने र यौ-न क्रि-याकलापमा समेत ह्रास आउने बताइएको छ ।अपेक्षा गरिएको र वास्तविकतामा फरक पाएपछि पो-र्न हेर्नेहरुमा यौ-न रोग देखा पर्न सक्छ । यसले अनावश्यक कौतुहलता सिर्जना गरेर विभिन्न भ्र-महरु समेत उत्पन्न गराउँछ ।
यौ’नप्रति हाम्रो विकृत सोंच छ । यौ’न भन्नसाथ त्यसलाई छा’डा भनेर नाक खुम्च्या’उने प्रवृत्तिले यस सम्बन्धमा खुला बहस हुन सकिरहेको छैन । नतिजा, यौ’नकुण्ठा जस्ता मनोविकारले धेरैलाई ग्र’स्त बनाइरहेको छ ।दाम्पत्य जीवनमा यौ’न सम्बन्धले खास महत्व र अर्थ राख्छ । यौ’न स’म्बन्ध बनाउनु भनेको केवल बंश निरन्तरताका लागि मात्र होइन । न त हल्का मनोरञ्जनका लागि मात्र । यो दम्पतीको मन, शरीरलाई एकाकार गर्ने एउटा प्राकृतिक र उत्तम विधी हो ।
यौ’न सम्ब’न्धमा जुन किसिमको मधुरता हुन्छ, त्यसले दम्पतीको सम्बन्धमा उर्जाको संचार हुन्छ । तर, यौ’न सम्ब’न्ध कमजोर भयो भने उनीहरुको सम्ब-न्ध पनि फिका हुन पुग्छ । आखिर किन यौ’न सम्ब-न्ध कमजोर र बोझिलो हुन्छ ? यसका दोषी को ? श्रीमान् कि श्रीमती ? वा दुबै ? हुन यसबारे जान्न, सोच्न र सुधार गर्न गरूरी छ ।अहिले जमाना बद्लिएको छ । मान्छेको दिनचर्या बद्लिएको छ । आधुनिक उपकरणसँग एकाकार हुँदै गएको मानव जीवनमा धैर्यताको कमी हुँदैछ । हरेक कुरा छिटो-छरितो होस् भन्ने चाहन्छन् । सबैलाई एक किसिमको हतारो छ ।
छिटो पढाई सक्ने, छिटो रोजगारी गर्ने, छिटो धन कमाउने, छिटो मान-प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने । यो हतारो एक प्रवृत्तिको रुपमा विकास भएको छ । यसको साइड इ-फेक्ट मानिसको यौ’न जीवनमा पर्न थालेको छ ।यौ-नमा पनि हतारो ! हो त, हामीलाई अहिले यौ’न सम्ब-न्धलाई सुमधुर बनाउने फुर्सद छैन । यौ’न सम्बन्ध क्षणभरमै बनाउने र क्षणभरमै त्यसबाट सन्तुष्ट प्राप्त गर्ने चाह बढेको छ ।
पुरुष वे’श्याको द’र्द’नाक पि’डा, आवेसमा उल्टै चि’र्थो’छन्
पाँच दिनमा ८ पटक सम्पर्क गरेपछी उनि म सँग भेट्न राजी भए तर मोवाईल ,
काठमाडौँमै डिएसपीले गरे अफिस भित्रै सविनालाई करणी
काठमाडौ । पूर्व मेचीकी महिला एसएसपी सौरभ राणाबाट पीडित भइन्। पीडितले गृहमन्त्रालय धाएर न्याय खोजिन्।
तीन साथीले पत्नी साटासाट गरेर यौ न स म्पर्क गरेको भिडियो बनाएपछि….
काठमाडौं, १० पुस । श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध निकै नजिकको सम्बन्ध हो । आफ्नो श्रीमान
भुटान दक्षिण एसियामा अवस्थित एउटा सानो देश हो। यसको सीमा दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारत